KIPTAS Silivri faha-3 taonan'ny Lotota Lotota no natao | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulKIPTAS Silivri andiany faha-3
22 / 05 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
kiptas silivri fanaovana sary dia natao
Tao anatin'ny lahateniny nandritra ny lanonana KIPT Silivri faha-3 amin'ny sehatra Lottery sekoly, ny filoha İBB Ekrem İmamoğlu dia nanao izao antso manaraka izao amin'ny Tale Jeneraly Ali Kurt: Izahay, mpiray tanindrazana avy any ary ny havany, raha mihevitra ny fetran'ny karama farany ambany any Tiorkia dia tsy mba nanonofy ny mponinay raha kely indrindra, ny foto-kevitra iray dia afaka miverina mody miaraka amin'ny vola, hoy i I Silivri 4 Project. Andao hanovozana maro isika anio ary hitondrana ny filazantsara ho an'ny fianakaviany. Amin'ny herinandro ambony; Andao hamelomana ny vahoakantsika, ny fiarahamonintsika amin'ny fanantenana fa 'na dia ao anatin'ireo fepetra ireo aza, dia ho vitan'ny fahafahana' izany. Io no adidintsika. Manantena izahay fa hanome izany vaovao mahafaly izany amin'ny Istanbul amin'ny herinandro ho avy amin'ny KIPTAS. ”
Nanatrika ny lanonana K LotTri Silivri andiany faha-3 taonan'ny Lototazana andiany faha-XNUMX ao amin'ny Kianja Metropolitan Istanbul (IMM). YBuz Erkut Sekretera jeneralin'ny IMB, Mpanolotsaina ny filoha İBB ary SözcüSü Murat Ongun, Filohan'ny Birao Ertan Yıldız sy ny Tale Jeneralin'ny KİPTAŞ Ali Kurt no niaraka. Talohan'ny lanonana dia nanao ny kabary i Kurt.
TOKONY: "FAMPIHORANA miaraka amin'ny HAFA TSY MISY AZONAO AZONAO"
Notsindriany fa nanao fandrosoana lehibe tao anatin'ny fotoana fohy izy ireo ary ny tetikasa trano sosialy Silivri andiany faha-3 dia iray amin'izy ireo. Nizara ny fampahalalana momba ilay tetikasa i Kurt ary nilaza hoe:
"Ny tetik'asanay, izay ahitana trano fonenana 1513, vondron-barotra 7, moske 300 misy olona 1, efitrano fianarana 26, sekoly ambaratonga faharoa sy faharoa ary foibe ara-pahasalamana 4, dia niasa tamina orinasa mpiantoka 1 tamin'ny dingana 3. Tamin'ny Aogositra 3, ny 2019 tamin'ny fandrosoantsika dia manodidina ny 2-70 isan-jato, raha ny iray amin'ireo lagsay kosa dia ao ambadiky ny drafitry ny asa misy 75 isan-jato. Amin'ny maha-ekipa anay, dia mitondra ny ambaratonga mitovy amin'ny dingana hafa isika miaraka amin'ny maodelin'ny orinasa izay novolavolainay tao anatin'ny rafitry ny lalàna. Rehefa niresaka voalohany momba ilay tetikasa izahay dia nahatsapa fa tsy mitovy ny fahazoan-dàlana sy ny fampiharana azy roa. Nofoanana koa ny drafitra momba ny zoning. Nanomboka ny fanomanana drafitra fampandrosoana izahay. Rehefa avy niantoka ny fankatoavan'ny drafitra avy amin'ny IMM izahay dia nahazo ny fanovana ny lisansa fanavaozana mifanaraka amin'ny tetikasanay ankehitriny ary namita ny fivezivezena amin'ny fanamorana ny gorodona tamin'ny Krismasy. ”
KURT: "NY APRIL-DIDY MBOLA MOMBA NY 2 volana"
Manambara izy ireo fa mikasa ny hitifitra ao amin'ny Eurasia Show Center any Yenikapı izy roa volana lasa izay, nilaza i Kurt fa tsy afaka hanatanteraka ireo fangatahana ireo izy ireo, noho ny areti-mifindra. Nilaza i Kurt fa nandeha tamin'ny fandaharana ho an'ireo mpahazo tombontsoa izy ireo izay hanana fahasahiranana amin'ity dingana ity. "Nahemotra ny volana Aprily-Mey izahay nandritra ny roa volana. Tao anatin'ny vanim-potoana vonjimaika tamin'ny volana Mey, dia nanao fandaharana izahay mba hividianana amina fametrahana mitovy mitovy aminy. Ny tanjonay amin'ity fampiharana ity dia ny fanamaivana ny entan'ny olompirenena mandoa ny hofan-trano sy ny fametrahana. Ireharehanay ny tenanay ho toy ny rafitry ny orinasa voalohany izay misy ihany koa amin'ny famoahana faingana any Torkia, "hoy izy.
İMAMOĞLU: "TONGAO IZAHAY NY PROJEKO INDRINDRA"
Hoy ny filohan'ny İBBoğlu İmamoğlu, "Tao anatin'ny vanim-potoana sarotra sy tao anatin'ny tontolo manahirana, ny KIPTAS rehetra dia naneho ny fahaiza-manaony hanomanana tetikasa izay nanana olana sasany taloha, mba hanaovana azy amin'ireo mpihazona havanana amin'ny fomba mendrika indrindra, mitazona ny kalitaony amin'ny haavony avo indrindra. Misaotra fatratra ny mpiasa, ny Tale jeneraly, ny filohan'ny birao, ny mpitantana rehetra ary mazava ho azy fa ny mpiasa rehetra amin'ny sehatra. Rehefa nitsidika ilay tanimbary aho dia hitako tamin'ny masoko fa ny tontolo miasa miasa ho an'ny aretin'ny valan'aretina dia nomena ary nomena ny kalitaon'ny famokarana notadiavin'ny mpahazo tombontsoa. Faly aho ”.
Nilaza i Imamoğlu fa nilaza ny tenany fa efa hatramin'ny voalohany izy. Teboka iray sarobidy izy io raha ny toerany. Manana ny maha-izy azy ny miaina dingana hafa ao Silivri. Misy zavatra manelingelina ny olona. Ao amin'ny ravin-taratasy na fanesoana, misy ny saha maitso eo akaikiny, misy dingana eo anoloantsika izay mbola tsy natao mihitsy, saingy tsy natombony mihitsy. Misy faritra fialamboly eto, adidy sy adidin'ny IMM ny manankarena sy manatsara azy miaraka amin'ny endrika zaridain'i Istanbul ”.
"NITIAVANA NY FIVAVAHANA ANTSIKA HIDITRA NY TOKONY HO AN'NY TANORA"
Ny fanamafisana fa ny filozofian'i KIPTAS lehibe dia ny famokarana trano sosialy, Imamoglu dia nanasongadina fa ny fampiana fahatsapana ny aesthetics amin'ny fampandrosoana ny tanàna dia iray amin'ireo tanjona lehibe. Nanamarika i İmamoğlu fa tsy maintsy atao laharam-pahamehana sy andraikitra ny andrimpanjakana. Manana iraka toy izany izy. Amin'ny iraka iray hafa, na izany aza, ny foto-kevitry ny trano sosialy, ny olona hahazoana trano hipetrahana amin'ny fidiram-bola any an-tokantranony any Tiorkia, misy fitsipika ara-bola ihany koa amin'ny fahaizana manome azy, fametrahana, ka afaka manonofy olona fotsiny ary manome tontolo iainana hahazoana trano izay mahatanteraka ny nanonofinofiny. Ireo fitsipika ireo dia manan-danja ho an'ny filozofia KIPTAS. Mazava ho azy fa ny fizotry ny famoronana modely mifandraika amin'ny fanovana an-tanàn-dehibe dia refy hafa. "Tsy maintsy mahavita mamokatra tetikasa mandanjalanja ara-bola sy manana fahaiza-mamokatra tetikasa afaka mandray anjara amin'ny fanovana ny tanàna sy ny fanamboarana ny tanàna hatrany Istanbul amin'ny tena misy."
"HITIAVANA NY FIVORIANA VAOVAO"
Statedmamoğlu dia nilaza fa ny tontolo manontolo dia hiditra amin'ny sehatry ny fahasalamana, fiainana ara-tsosialy ary olana ara-toekarena noho ny fizotran'ny valanaretina, ary nanantitrantitra izy ireo fa mihetsika amin'ny fihetsiketsehana. Nanamarika i İmamoğlu fa afaka mandresy ireo andro ireo amin'ny fametrahana tontolo miray hina, fampihavanana ary fahatokisana ary hitohy toy izao manaraka izao:
“Tapitra ity dingana ity, hitohy ny fiainana. Saingy ny andrim-panjakana tahaka antsika dia manana adidy hamelomana ny fanantenan'ny olona amin'ny asa mety. Na eo aza ny fahasarotana ireo, ny fahafahantsika mamokatra asa; Na dia eo aza ny fahasarotana ireo, famoronana asa; Na eo aza ny fahasarotana ireo dia adidintsika ny maneho ny fahaizana mampitombo ny fampiononana ny mpiasa ao amintsika. Na eo aza ny fahasarotana rehetra dia hitohy hatrany isika amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny toe-piainan'ny mpiasa. Hamorona fotoam-piasana vaovao izahay ary ho antenain'ireo sehatra vitsivitsy misy ny dingana mpisava lalana hataontsika. ”
'HOROHOROHANA NY FIANAKAVIANA'
Taorian'ireo teny ireo dia namarana ny kabariny i İmamoğlu tamin'ny alàlan'ity antso manaraka ity ho an'i Kurt, Tale jeneralin'ny KIPTAS:
“Hanolotra ny trano vitsivitsy ataontsika amin'ny volana Jona ianao. Izahay, mpiray tanindrazana avy any sy ny havany, raha mihevitra ny fetran'ny karama farany ambany any Tiorkia dia tsy mba nanonofy ny mponinay raha kely indrindra, ny foto-kevitra iray dia afaka miverina mody miaraka amin'ny vola, hoy i I Silivri 4 Project. Amin'izao andro izao, miady amin'ny toe-karena sy ara-tsaina isika. Aoka isika hahomby ho fanantenana ho an'ny olona amin'ny alàlan'ny famolavolana fomba mety, fomba mety, modely mety ary famokarana asa sy toetra mendrika. Andao hanadihady maro isika anio, andao hanolotra ny vaovao mahafaly amin'ny Eid ho an'ny fianakaviany. Andao hamelomana ny vahoaka, ny fiarahamonintsika, amin'ny fanantenana 'ny mety hiseho na dia eo ambanin'ireo fepetra ireo aza' amin'ny herinandro ho avy. Io no adidintsika. Manantena izahay fa hanome izany vaovao mahafaly izany amin'ny Istanbul izahay amin'ny herinandro ho avy amin'ny KIPTAS. Ny namantsika dia hiomana amin'izany. "
Eo anatrehan'ny lahateny ao amin'ny Notary Bakırköy faha-23, dia nanomboka ny loteria iray. Imamoğlu, Erkut, Ongun, Yıldız ary Kurt no namaritra ny anarana voalohany sy ny trano nofidiny tao amin'ny Silivri andiany faha-3 amin'ny Silvita tamin'ny alàlan'ny fanaovana sary.
Kadir Topbaş: Ny Metrobus dia halefa any Silivri, ny Metreira Metro dia ho avy!
Dingana amin'ny dingana miaraka amin'ny isa Kabataş-Mizara metro metro
Nanomboka ny Dingana Fihetsiketsehana tao Kanuni Bulvarı
Miditra amin'ny sehatra an-tsehatra ireo fitaterana an'i Hamitler any Bursa.
Ireo Silikaly E-5 soso-kevitra momba ny lalamby fandalinana
Istanbul Metro ho any Silivri
Ny filazantsara Metrobus mankany amin'ny Linie Büyükçekmece-Silivri
Manambara ny tetikasa Silivri Metro i Topbaş
Ny lalan'i Metrobus dia natolotra an'i Silivri
Ny Büyükçekmece- Silivri Metro Line dia nihatra tamin'ireo niharan'ny KİPTAŞa
Fametrahana sy rafitra fanamafisana mba hapetraka ao amin'ny fidirana Değirmenköy ao Silivri
TÜVASAŞ 20 Sary sy valiny
TCDD 356 ny mombamomba ny mpandray anjara
Antray 2. Tetik'asa fitsapana fialan-tsasatry ny Stage Square-Airport
Çerkezköy Silivri teo anelanelan'ny sarety sarety nopihan'i Axle Breaked